Vaovao - Dimy taona nampihenana ny fahaiza-manao, nihena ny lanjan'ny lanjan'ny vy
Vao tsy ela akory izay dia nanambara ny Vaomieram-pirenena misahana ny fampandrosoana sy ny fanavaozana ary ny minisiteran'ny Indostria sy ny haitao fampahalalam-baovao fa hikarakara "jery todika" manerana ny firenena ny fihenan'ny fahaizan'ny vy sy ny fihenan'ny vokatra vy any amin'ny 2021. Talohan'izay, Xiao Yaqing, Minisitry ny Indostria ary Teknolojia fampahalalam-baovao, nilaza ihany koa fa manodidina ny tanjona "karbonina roa" dia ilaina ny mampihena am-pahataperana ny fivoahan'ny vy tsy manjary. Nandritra ny dimy taona nampihenana ny fahafahan'ny famokarana, miatrika fiovana sy fanamby vaovao ny indostrian'ny vy.
“Mijery any aoriana” mandritra ny dimy taona
"Manomboka amin'ny 2016, maharitra dimy taona ny fihenan'ny 100 tapitrisa ka hatramin'ny 150 tapitrisa taonina ny fahaizan'ny famokarana vy tsy manara-penitra." Io no tanjona kendrena napetraka tao amin'ny "Opinions an'ny filankevi-panjakana momba ny famahana ny fahafaha-manao tafahoatra amin'ny indostrian'ny vy sy vy hahatanteraka ny fampandrosoana sarotra.
Tamin'ny 1 martsa lasa teo, Xiao Yaqing dia nampiditra tamin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety fa hatramin'ny 2016, ny paikadin'ny "fanesorana telo, ny fihenan'ny iray ary ny fanampiana iray" dia nanao fandrosoana lehibe tamin'ny fampihenana ny fahafahan'ny famokarana vy, izay efa nanery ny fahafahan'ny famokarana vy 170 tapitrisa taonina. Fantatra fa nahatratra 64,74 tapitrisa taonina ny fahaizan'ny famokarana vy tsy manara-penitra izay nisintona tamin'ny "orinasa zombie".
Mba hahafahana manatanteraka tsaratsara kokoa ny dingana manaraka amin'ny fampihenana ny fahaiza-manao, amin'ny 2021, ny kinova vaovaon'ny fireneko amin'ny fampiharana ny fepetra fanoloana fahaiza-manao vy sy ny fametrahana tetikasa vy ary ireo antontan-taratasy manan-danja hafa dia havoaka mba hiantohana fa mihena fotsiny ny fahafahan'ny famokarana vy. .
Ny fifehezana ny tahan'ny fanoloana dia fomba iray lehibe hanatratrarana ny fitambaran'ny fambolena fandrarana ny fahafaha-mamokatra vaovao sy ny fanitsiana ny firafitra. Araka ny angon-drakitra, nanomboka tamin'ny fampiharana ny fepetra fampiharana ho an'ny fanoloana ny fahaiza-manao amin'ny indostrian'ny vy sy vy amin'ny taona 2018, hatramin'ny taona 2020, 16,25 tapitrisa taonina ny fahaizan'ny famokarana vy, niaraka tamin'ny fivoahana netina 26,3 tapitrisa taonina, miaraka amin'ny ankapobeny. fivoahana 1.15: 1.
Ny fandrindrana sy ny fandaminana indray dia mandroso hatrany. Tamin'ny taon-dasa, nandamina nifandimby ny fandrindrana ny vy Maanshan vy sy vy ary vy ary vy Chongqing China ary hanitatra ny faritaniny i China Baowu. Jiangsu Xuzhou dia mikasa ny hanatsara sy hampiditra orinasa 18 vy sy vy hamorona konglomerat vy sy vy lehibe 2 ao anatin'ny taona, ary hahatratra 30% ny fahafaha-mamokatra vy amin'ny 2020.
Ny tanjona teo aloha momba ny fihenan'ny overacacity dia tratra. Ny “fijerena” ny fihenan'ny decapacity vy amin'ity taona ity dia hifantoka amin'ny fanaraha-maso ny fampiharana ny asa fanalefahana vy sy ny fanitsiana any amin'ny faritra rehetra mifandraika hatramin'ny 2016. Ny lakile dia ny famahana ny fahaizan'ny famokarana vy be loatra ary ny fanenjehana ireo “distrika”. Ny fanidiana sy ny fisintonana ireo fitaovana fandrendrehana tafiditra amin'ny "Steel".
Qin Yuan, manam-pahaizana momba ny toekarena, dia nilaza tamin'ny mpitati-baovao iray ao amin'ny Beijing Business Daily fa amin'ny dingan'ny fampihenana ny fahafahan'ny famokarana vy ao anatin'ny dimy taona lasa, dia nesorina ny "vy vy" ary nesorina tanteraka tamin'ny tsena. Ho fanampin'izay, nodiovina ny sasany tamin'ireo "orinasan'ny vy zombie", ary ny ampahany hafa dia novelomina taorian'ny nampidirina. Ny fifantohan'ny indostrian'ny vy dia nitombo hatrany, ary ny fananana sy ny trosa amin'ny orinasa vy maro dia nihatsara sy namboarina ihany koa.
Na eo aza ny valiny mazava, ny komisiona ho an'ny fampandrosoana sy ny fanavaozana ary ny minisiteran'ny indostria sy ny haitao fampahalalana dia nanipika ihany koa tamin'ny vaovao fa misy ny fifanoheran-kevitra lalina lalindalina ao amin'ny indostria mbola tsy voavaha ifotony. Mandritra izany fotoana izany, miaraka amin'ny fanatsarana ny tombotsoan'ny indostrian'ny vy, ny faritra sy orinasa sasany dia manana faniriana ny hanangana am-pahefana ny tetikasa vy, ary ny fanamafisana ny zava-bitan'ny fihenan'ny fahaiza-manao dia miatrika fanamby vaovao. Ny tanjon'ity asa ity dia ny hitarika ireo orinasa vy handao ny fomba fampandrosoana lehibe handresena amin'ny habetsahana ary hampiroborobo ny fampandrosoana avo lenta ny indostrian'ny vy.
Mikasika ireo olana sisa tavela dia namakafaka i Qin Yuan fa amin'ny fanadiovana ireo orinasam-pahantrana dia mihatsara ny tombom-barotra amin'ny indostria iray manontolo ary matanjaka ny fanirian'ireo orinasa hampitombo ny famokarana. Na dia mivoatra aza ny fironana amin'ny fampidirana dia midika koa izany fa lasa sarotra kokoa ny fampidirana.
Fantatra fa ity asa ity koa dia handrakotra ny fananganana sy ny fananganana tetikasa fandorana vy, ary koa ny fampiharana ny fanitsiana sy ny fanitsiana ireo olana hita tamin'ny fizahana teo aloha. Ary ny asa fampihenana ny vokatra vy eto amin'ity taona ity dia hifantoka amin'ny fampihenana ny vokatra vita amin'ny vy madinidinika amin'ireo orinasa tsy mahomby amin'ny tontolo iainana, fanjifàna angovo avo, ary haavo teknolojia somary mihemotra, mba hahazoana antoka fa hihena ny vokatra vy eto amin'ny firenena amin'ny 2021- amin'ny taona.
Ampitomboy ny famokarana nefa mampihena ny fahafahan'ny famokarana
Na dia hohamafisina bebe kokoa aza ny fahaizan'ny famokarana vy, dia maminavina i Lange Steel fa hitombo hatrany ny tinady amin'ny fanjifana vy amin'ny taona 2021, ary ny tinady ataon'ny solika an-tsokosoko mandritra ny taona dia mety hahatratra 1,1 miliara taonina, fiakarana manodidina ny 5% noho ny tamin'ny taon-dasa. Ny data avy amin'ny National Bureau of Statistics dia naneho ihany koa fa hatramin'ny volana Janoary ka hatramin'ny Febroary, ny vokatra vy an-trano dia nitombo 6,4% isan-taona ary ny vokatra vy dia nitombo 12,9% isan-taona.
Na dia mampihena ny fahafahan'ny famokarana aza nefa mampitombo ny famokarana, dia toa "boribory hafahafa" izany. Mikasika izany, nilaza i Xiao Yaqing fa ny famerenana amin'ny laoniny ny toekarena haingana, ny fiverenan'ny asa sy ny famokarana, ary ny fangatahana fananganana amin'ny sehatra maro dia mitaky fangatahana akora betsaka indrindra sy akora fanampiny, ao anatin'izany ny vy. Ho fanampin'izany, ny tena fampiasana vy isan-kapita dia mbola eo am-pamolavolana raha oharina amin'ny vokatra ara-toekarena tanteraka, ary mbola betsaka ny toerana ho an'ny fampandrosoana amin'ny fangatahana fanamboarana sy fitaterana fiara.
Tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny mpanao gazety iray tao amin'ny Beijing Business Daily, Cheng Yu, mpikaroka zokiolona ao amin'ny Institute of Understanding, dia nanadihady fa ny fihenan'ny fahaiza-manao dia vita tamin'ny fanitarana ny fangatahana. Eo ambanin'ny fanentanana ny fampiroboroboana ny indostrian'ny trano sy fiara, ny fitakiana vy dia mbola matanjaka, izay mamorona famoronana vy ihany koa. Mba hampitomboana ny fampiasam-bola amin'ny tontolon'ny tombom-barotra tsaratsara kokoa dia hofoanana mialoha ny fotoana ny fahafaha-mamokatra tsy ilaina.
Ary amin'ity taona ity, ny fanonerana ny lesoka sy ny fampiasam-bola amin'ny fotodrafitrasa dia hanjary teboka manandanja ho an'ny fitomboana ara-toekarena marin-toerana ihany koa, ary hitombo hatrany ny fampiasam-bola amin'ny trano sy tany, izay hahafahana manamafy hatrany ny fanjifan'ny vy any Shina amin'ny 2021. Qin Yuan mino koa fa ny vidin'ny vy ankehitriny dia mbola miakatra, ary ny politika koa dia mampihena ny fihenam-bidy amin'ny haba amin'ny fanondranana ary mampitombo ny fanafarana entana mifanaraka amin'ny tinady ao an-trano.
Ankoatry ny fangatahan'ny tsena dia tokony ho hitantsika ihany koa ny famatsian-tsena. Chen Kexin, lehiben'ny mpandalina ny Lange Steel Economic Research Center, dia nandinika teo aloha fa ny antony antenaina hitombo hatrany ny vokatra amin'ity taona ity dia ny fahaizan'ny famokarana vy nandroso tato ho ato. Amin'ny taona 2021, ny sasany amin'ireo tetik'asa manana fahaiza-manao vaovao ireo dia hapetraka tsirairay amin'ny famokarana, ary antenaina mbola hisy taonina am-polony taonina. Mandritra izany fotoana izany dia mitombo hatrany ihany koa ny tahan'ny fampiasana ny fahaiza-manao, hany ka mbola manana toerana vaovao ny fanitarana ny vokatra amin'ity taona ity.
Fanamby vaovao eo ambanin'ny tanjona "karbonina roa"
Mba hahatratrarana ny tanjon'ny "fiakarana an-tampon'ny karbonina" sy ny "tsy fitongilanana amin'ny karbaona", tamin'ny faran'ny volana desambra lasa teo, dia nanazava i Xiao Yaqing tao amin'ny National Conference and Informatization Working Conference fa ny tanjon'ny fisondrotan'ny karbaona sy ny tsy fitongilanana karbonika dia tokony hifantohana. amin'ny fampiharana ny hetsika karbaona ambany indostrialy sy ny injenieran'ny famokarana Green. Amin'ny maha-indostria mahery vaika ny angovo azy, ny indostrian'ny vy dia tsy maintsy mampihena ny famokarana vy tsy miangatra mba hiantohana ny fihenan'ny vokatra vy isan-taona isan-taona.
Raha ny fahitan'i Qin Yuan, ny tsindry amin'ny indostrian'ny vy eo ambanin'ny tanjona "karbonina roa" dia mila jerena mitokana: "Raha ny fiakarana karbona dia mety tsy dia lehibe loatra ny tsindry. Miaraka amin'ny fanoloana ny dingana fohy amin'ny dingana lava dia tena hanampy izy io. Fampihenana ny famoahana gazy karbonika. Amin'ny fizotry ny famokarana vy dia mbola betsaka ny toerana hampihenana ny famoahana gazy karbonika, ka izany no mahatonga ny orinasa vy maro hametraka ny ora tampon'ny karbaona mialoha ny 2030. ”
Voalaza fa ny "Planin'ny asa-by vy an'ny orinasa Carbon sy ny fihenan'ny karbaona" dia namolavola drafitra nohavaozina sy nohatsaraina, ary ny tanjona kendren'ny tampon'ny karbaona dia napetraka ho toy ny: alohan'ny 2025, ny indostrian'ny vy dia hahatratra ny famoahana entona karbaona avo indrindra; amin'ny 2030, ny indostrian'ny vy dia hanana famoahana gazy karbonika. 30% ambany noho ny sanda farany ambony, tombanana fa 420 tapitrisa taonina ny famoahana gazy karbonika.
Qin Yuan dia mino fa ny tsy fanjarian-tsolika dia hanery bebe kokoa ny indostrian'ny vy. “Tsy azo ihodivirana ny famoahana ny gazy karbonika amin'ny famokarana vy maharitra. Izany dia mitaky fanavaozana somary lehibe ny fizotry ny indostrian'ny vy. Saingy satria tara ny fe-potoana dia miankina amin'ny indostrian'ny vy ihany koa amin'ny fanatanterahana ny tampon'ny karbaona. Fa inona ny toe-javatra? ” Qin Yuan nilaza tamin'ny mpanao gazety iray tao amin'ny Beijing Business Daily.
Mandritra izany fotoana izany dia tokony homarihina fa ny indostrian'ny vy eo am-panaovana ny de-capacité dia mbola goavana sy eo ambany fanerena. Tamin'ny Forum 2021 (Faha-12) China iron and Steel Development Forum natao andro vitsy lasa izay, Hu Wenrui, akademisiana ao amin'ny Akademia Shinoa misahana ny injeniera, dia nanantitrantitra ihany koa: "Ny indostrian'ny vy sy vy dia ilay indostria misy famoahana karbaona lehibe indrindra amin'ireo 31 sokajy famokarana, mitontaly 15% eo ho eo amin'ny fandefasana entona rehetra. ”
Fantatra fa na dia mihena aza ny famoahana dioksidan'ny firenentsika isaky ny taonina vy dia mbola somary be ihany ny totaliny. Xiao Yaqing dia nilaza teo aloha fa ny salan'isa amin'izao fotoana izao dia ny 575kg arina arintany, raha oharina amin'ny 545kg any Shina. Noho ny habetsahan'ny volan'ny Sina dia mbola misy ny mety trandrahana amin'ny resaka fitsitsiana angovo sy ny fihenan'ny famoahana entona.
Ny "Planin'ny Indostria Steel Carbon ary ny drafitra fampihenana ny karbaona" dia manambara mazava tsara fa misy làlana lehibe dimy hahatratrarana ny tanjon'ny orinasa vy, dia ny fampiroboroboana ny lamina maintso, ny fitehirizana angovo ary ny fahombiazan'ny angovo, ny fanatsarana ny fampiasana angovo sy ny firafitry ny lamina ary ny fananganana. rojo indostrialy toekarena boribory. Ary apetraho ny teknolojia ambany-karbaona mahomby.
Nilaza i Cheng Yu fa eo ambanin'ny fitakiana "karbonina roa", ny indostrian'ny vy dia mila manova tsy tapaka ny rafitry ny angovo sy ny fahombiazan'ny angovo, nefa miaraka amin'izay koa ny fanovana ny firafitry ny angovo dia midika ihany koa ny fanovana ny fizotran'ny metallurgical, izay fampiasam-bola lehibe. Ireo fahaiza-manao famokarana maro izay efa nahafeno fepetra tany am-boalohany nefa mbola tsy naterina tanteraka dia hofoanana koa aloha, ka mbola hiatrika fanamby hatrany ny tombom-barotra amin'ireo milina vy.